HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 29-4-2020
Wednesday April 29, 2020 - 10:09:10 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweyne Farmaajo oo baaq deg deg ah ka soo saaray xaalada Khardho Madaxweynaha JF/S.Maxamed C/hi Farma ajo oo ka tacsiyeeyay musiibada naf iyo maa lba leh ee ka dhalatay daadadkii ku fatahay M/ Qardho ayaa ku baaqay in wad ajir loogu istaag
Madaxweyne Farmaajo oo baaq deg deg ah ka soo saaray xaalada Khardho Madaxweynaha JF/S.Maxamed C/hi Farma ajo oo ka tacsiyeeyay musiibada naf iyo maa lba leh ee ka dhalatay daadadkii ku fatahay M/ Qardho ayaa ku baaqay in wad ajir loogu istaago shacab iyo do wladba u gurmadka dadkeenna ay soo gaartay dhibaatada xoo ggan. Madaxweynaha ayaa tilmaam ay murugada ay leedahay boqolaalka qoys ee hoygoodii iyo hantidoodii ku waayey daadadkii ku soo rogmaday magaalada, iyada oo dalke enna ay ka jirto halis caafimaad oo la tacaalid deeda aynu isugu geynay maan iyo muruq. "Waxaan idinla qeybsanaynaa murugada iyo dhibka, annaga oo xoogga saareyna sidii aan u uga qayb qaadanlahayn samata-bixinta qoysaska nugul ee Shalay ay soo food-saar tay dhibaatadu. Dhammaan dadkeenna Soo maaliyeed, gaar ahaan reer guuraaga waxaan ugu baaqayaa in ay ka taxadaraan daadadka iyo fatahaadaha maadaama lagu gudo jiro xilli roobaadkii." Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Far maajo ayaa bogaadiyey isu gurmashada iyo is-garab istaagga ay isu muujiyeen dadka deeg aanka, gaar ahaan dhallinyaradii Habeen hore oo idil u taagnaa samata-bixinta qoysaska iyo dadka nu gul. Madaxweynaha ayaa faray Xukuumadda inay Guddi Gurmad Qaran ah u saarto musiiba da daadadkan ku soo rogmaday Qardho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa Alle naxariistiisa Janno u weydiiyey dhammaan mu waadiniinta ku shahiiday daadadkan, caafima ad deg deg ahna waxa uu u rajeeyey intii ku waxyeelowday.
Kheyre oo Guddi u saaray Xaaladda M Qardho
R/Wasaaraha Soomaaliya Md.Xasan Cali Kheyre ayaa Magacaabay Guddi Wasiiro oo ah oo hoggaamin doona u gurmashadda Shac abka degmada Qardho ee daadku sameey een.
Guddiggaan ayaa waxaa Guddoomiye u ah Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye.
Waxaa ka mid ah Wasiiraddaha , Wasaar adda Gargaarka, Boostadda iyo isgaarsiinta, Qorsheynta, Wasiir dowlaha Maaliyadda iyo Wasiir ku xigeenka Caafimaadka.
Kheyre ayaa guddigaan amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gargaaraan Shacabka degmada Qardho. Waxaa sii kordhaya khas aaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay daadadkii ku rogmaday Xaafado ka tirsan Magaalada Khardho ee Xarunta Gobol ka ay Puntland u taqaano Karkaar.Ciidamada Qeybta Booliska Gobolka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada ayaa waxaa ay wadaan Gurmadyo kala duwan,waxaana dhaqaatiirta Isbitaalka Khardho ay sheegeen in loo keenay ilaa 7 Ruux oo Meyd ah,kuwaas oo daadadka ku dhintay.
Siyaasi weyn oo madaxda sare ee Dowlad da Federaalka u soo jeediyay Talooy in Muh iim ah iyo inay dadka caawiyaan.
Ambassador Maxamed Cali Nuur (Amer ica) ayaa ka hadlay Cudurka halista ah ee Co ronavirus oo dad farabad an oo qaba Cudur kaas laga helay Magaalooyin ka tirsan dalka Sooma aliya.
Md.Cali Amerika oo wareysi siiyay telefash inka Dalsan ay aa waxaa uu sheegay in Cu durka COVID-19 uu yahay xaalad adeg oo adu unka kusoo korortay, isla markaana loo baah an yahay in dadka Soomaaliyeed ay qaatan tallooyinka Caafimaad ee loo jeedinayo.
Waxaa uu Cali Amerika dadka Soomaaliye ed ee la jiifa Cudurka uu Alle uga baryay in uu Ca afimaad siiyo, halka kuwo u dhintay Xanuunka uu Alle Janada ka waraabiyo, wuxuuna shacab ka la Codsaday inay feejignaan ka galaan Cud urka.
Sidoo kale Ambassador-ka ayaa ku baaqay in la caawiyo dadka Soomaaliyeed ee aan heli karin Afurka, maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, isagoona sheegay inay sameeyeen hay’ad dadka u sameeysa gargaar.
Dhinaca kale Madaxweyne Maxamed C/hi Farmaajo iyo R/Wasaare Kheyre ayuu Maxam ed Cali Nuur ugu baaqay inay dadka hor yima adan oo ay kala hadlaan Cudurka Coronavirus oo kusii faafaya gudaha M/Muqdisho, isla mar kaana ay shacabka ku baraarujiyaan inay qaat aan talooyinka Caafimaad ee la xiriira ka hor tagga COVID-19.
Ambassador-ka ayaa wuxuu isaga oo sii ha dlaayay uu tilmaamay in Miisaaniyada D/FS. ay ku jirto qeyb loogu talagalay in dadka lagu caawiyo, loona baahan yahay xiligaan in dad ka lagu caawiyo, maadaama lagu jiro bisha Ramadaan.
Wasiir ka tirsan dowladda Jabuuti oo u dhintay coronavirus
Waxaa dalka Jabuuti ku dhintay wasiirkii ma daxtooyada u qaabilsanaa dhanka maalga shi ga, Ali Geulleh Aboubaker, Sida uu soo xaqii jiyey waryaha BBC-da ee dalka Jabuuti Maxa muud Cismaan Bulxan.
Taariikhda marxuun Ali Geulleh Abouba ker Wuxuu ka mid ahaa oo lagu xasuusta as aasayaashii jabhaaddi la dag aalantay 1991-kii dowladdii Wa qtigaas uu hogaaminayay madax weyne Has san Guuled Abtidoon, ujeedkii ugu Weynaa ee dagaalkan ayaa waxa uu ahaa sidii aay Canfar ta saami culus uga heli lahayd dowladda. Mas uuliyiinta jabhaadii Canfarta Frud oo uu ka mid ahaa marxuunku ayaa waxa aay aqbaaleen in ay wadahadal la furaan dowl adda ugu dam beynna waxa ay aqbaaleen inay qaatan heshi iskii lagu magaacabay Ambaaca 26 Des embar 1994-kii .
Heshiiskii kadib waxaa loo magaacabay marxuunka madaxa xafiiska madaxweyne Jab uuti oo uu 17 mamuulayay sidoo kale sanadkii 2016-kii waxaa uu noqday madaxii ololaaha doorashadii madaxweyne Geulleh . MarkiI uu ku guulestay madaxweyne Ismaacill Cumar Geulleh xilka 12 may 2016-kii ayuu u magaa cabay wasirka malgashiga madaxtooyada Jab uuti .
Madaxweynaha dalka Jabuuti ayaa tacsi u diray qoyskii u ka baxay marxuunka iyo dadki uu u dhaawa intaba isaga oo ku amaanay doorkii uu ku laaha nabadda iyo horomarka dalka Jabuuti.
Dowladda oo Qalab iyo Dawooyin ku wareejisay Maamulka K/Galbeed
DFS ayaa Shalay oo Talaado ah waxaa ay Agab iyo dawooyin Caafimaad gaarsiisay xaru nta karantiilka ee Covid-19 oo maamulka K/g albeed uu ka hirgeliyay Baydhabo.
Qalabkaan oo dhawaan Wasaaradda Caafi maadka Soomaaliya ay sheegtay in la siinayo Maamul Goboleedyada ayaa waxaa loogu talo galay ka hortegida faafitaanka Cudurka COVI D-19. Mas’uuliyiin ka tirsan W/Caafimaadka Maamulka K/Galbeed ayaa D/Soomaaliya kala wareegay qalabkaan iyo dawooyinkaan oo no ocyo kala duwan leh,iyaga oo ka mahad cel iyey.
Maamulka K/Galbeed ayaa waxaa uu dif aac uga jiraa Cudurka Coronavirus,waxaana jir in kiis la xiriira Coronavirus oo laga diiwaangeliyey deegaannada Maamulka Koon fur Galbeed.
Kiisaska Covid 19 ee Soomaaliya gaaray 528 iyo Koonfur Galbeed oo kusoo biirtay
W/Caafimaadka XFS ayaa faahfaahin ka bixisay Xaaladihii ugu dambeeyay ee Cudurka Covid 19. Wasaaraddu waxaa ay shaacisay 46 xaaladood cusub ee Covid-19,taasi oo tirada guud ka dhigaysaa 436 oo kiis dadka uu soo ritay xanu unka Corona Virus.
Warbixinta Shalay ee W/Caa fimaadka ayaa siddaan u qorneyd: Waxaa cudurka COVID-19 laga helay 48 qof.
> Koofur Galbeed: 4
> Jubbaland: 3
> Benadir: 41
> Tirada Guud: 528
> Dhimashada Guud: 29
> Bogsashada Guud: 19
Somaliland oo bilaawdey kulamo lagu xal inaayo dagaal beeleedyo dhacay
D/Ceelafweyn ee G/Sanaag ayaa waxaa ka bilaawday kulamo kala duwan oo xal looga ga arayo dagaal beeleedkii maalma ka hor ka dha cay deegaanka fadhiga ab ee duleedka degmad aas.
Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Arrima ha Gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa kulan la qaatay Guddiga nabada ynta dagaal beeleedyada D/Ceel-afweyn,isaga oo kala hadlayay sidii loo adkeyn lahaa Nabad da degmada iyo degaannada hoostaga.
W/Arrimaha Gudaha Soomaaliland Maxa med Kaahin Axmed ayaa faray Guddiga naba deynta inay xoojiyaan dib u heshiisiinta,isla ma rkaana dadka dhibaatada wada meel looga soo wada heysto.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa dhawaan Ciidamo kala dhex-dhigtay maleeshiyaadkii ku dagaalamay deegaanka Fadhigaab ee degm ada Ceelafweyn,waxaana dagaalkii ku dhintay 2Ruux halka Saddex kale ay ku dhaawac meen.
Dadka ku dhintay daadadka Magaalada Khardho oo kordhay
Waxaa sii kordhaya khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay daadadkii ku rogmaday Xaafado ka tirsan M/ Khardho ee Xarunta G/Puntland u taqa ano Karkaar.
Ciidamada Qeybta Booli ska Gobolka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada ayaa waxaa ay wadaan Gu rmadyo kala duwan,waxaana dhaqaatiirta Isbi taalka Khardho ay sheegeen in loo keenay ilaa 7 Ruux oo Meyd ah,kuwaas oo daadadka ku dhintay.
Dadka Xaafadaha qaar laga soo badbaadi yey iyo kuwa ku dhintay ayaa waxaa ku jira Hooyo iyo laba Carruur ah oo ay dhashay, wa xaa sidoo kale burburay Goobihii Ganacsiga ee Magaalada.
Xaalad cakiran ayaa ka taagan Magaalada Khardho,waxaana gaaray Madaxweynaha Pun tland iyo Wafdi Wasiiro ah,kuwaas oo u kuurg alaya xaaladaha kajira Khardho iyo khasaar aha ka dhashay daadadka ku rogmaday.
G/ Ku xigeenka hawlaha guud Gobolka Banaadir oo Shalay xilka la wareegay
Guddoomiye Kuxigeenka cusub ee Hawl aha Guud Maamulka Gobolka Banaadir Md. Cumar Cali Cabdi ayaa xilka kala wareegay Guddoomiye ku xigeenkii hore Aadan Shiikh Cali Fiid ow. Munaasabada xil war eejinta oo ka dhacday xar unta Aqalka Dowladda Ho ose ee Xamar waxaa goobjoog ka ahaa Gu ddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Md. Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish).
Guddoomiye Ku xigeenka Hawlaha guud ayaa maalin ka hor waxaa magacaabay Mada xweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, wuxu una bedelay shaqsi in muddo ah Gobolka joogay.
Masuuliyiinta cusub ee dhawaan la maga caabay ayaa waxaa haray oo kaliya Guddoomi ye Ku xigeenka cusub ee Maaliyadda Gobolka Banaadir inuu xilka la wareego.
Sheekh Cali Dheere oo ka hadlay
CORONAVIRUS iyo ‘halkuu Somalia ka soo galay’
Afhayeenka guud ee Xarakada Al-Shabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa markii ugu horreysay ka hadlay cudurka faafa ee Coronavirus oo haatan fara ba’an ku haya dalal badan oo ay ka mid tahay Soomaal iya iyo halka uu Soomaaliya ka soo galay.
Sheekh Cali Dheere oo soo duubay farriin maqal ah ayaa marka hore dardaaran iyo tal ooyin u jeediyey dhammaan Muslimiin ta, gaar haan dadka Soomaaliyeed.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in cudarkaan uu si gaar ah ugu faafay wadamo uu ku shee gay inay cadow ku yihiin Islaamka iyo Musl imiinta, inkasta oo xaqiiqda ay tahay in dalal badan oo Muslim ah oo Soomaaliya ay ku jirto uu sidoo kale ku faafayo cudurka.
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa sidoo kale intaasi ku daray in cudurada sidoodaba ay yihi in ciqaab iyo cannaan xaga rabi uga timid addoomadiisa Gaal iyo Muslim.
"Cudurkan marka loo fiiriyo dalalka kuw ugu cadawsanaa xaga Islaamka iyo Muslimiin ta ayuu ku faafay, Cuduradan maxay yihiin ma xaa u sabab ah, muslimiinta maxaa uga aad an, cidii muslim ee uu ku dhacay maxaa la gu dboon, maxaase looga hortagi karaa ama u da awo ah, cudurada waa ciqaab iyo cannaan xa ga rabi uga timid addoomadiisa, gaal iyo mus lim, si uu xasuusuiyo dulmiga iyo macaasida faraha kula jiraan, ayna ogaadaan cadaab kan ka adag inuu dambeeyo,” ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Waxa kale oo uu Afhayeenka Al-Shabaab soo hadal qaaday sida uu cudurkaan u samee yey Soomaaliya, wuxuuna carrabka ku dhuftay in bilowgiisa uu dalka ka soo galay kana dil laacay xarunta Xalane ee magaalada Muqdi sho, ee shisheeyaha ay degan yihiin, sida uu hadalka u dhigay.
Sheekh Cali Dheere oo hadalkiisa sii wata ayaa dhaliilay sida ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ula taacaaleyso xananuunka an, isaga oo shaaciyey in Masaajidada ay xir tay, halka ay furan yihiin goobaha munkarka, si da uu hadalka u dhigay.
"Umadda waa la cunaqabateeyay ishii cud urka ka soo faafayay ee Xalane cidna waxba kama qaban, loomana socdo, goobaha munk arka waa furan yihiin halka masaajidada iyo dusgiyada waa hore lagu soo rogay in la xiro, tan kale masaajidada waa halkii la rabay in loo cararo oo si allaah laga baryo in si uu cudurkan nooga badbaadiyo in ayaga laga bil aabo waxaa leenahay baroorta orgiga ka we yn, dano kale ayaa jira, in anagoo muslimiinta nagala xiro masaajidada,” ayuu yiri markale yiri Afhayeenka Al-Shabaab.
Ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay dadka Muslimiinta ahi inay muujiyaan taxadar, islam arkaana ay Alle ka baryaan inuu ka dulqaado cudurkan iyo dhibaatooyinka heysta
Jeneral Khalifa Haftar oo sheegtay hog gaanka Libya
Jeneral-ka fallaagada ah ee dalka Libya Khalifa Haftar ayaa Isniintii ku dhowaaqay inuu haysto "sharciyadda dadka” ee ah inuu dalka hogaamiyo, isaga oo sheegay inuu soo geba-geboobay heshiis siy aasadeedkii la gaaray 2015, wacadna ku maray inuu sii wadi doono weerarka uu ku qabsanayo mag aalada Tripoli.
Khudbad uu ka jeediyey taleefishinkiisa Li bya ee Al-Hadath TV, ayaa Haftar waxa uu ku sheegay in ciidankiisa isku magacaabay "Cii danka Libya” ay "ku faraxsan yihiin in la siiyey sharciyad taariikhi ah” oo ay ku hoggaamina yaan Libya.
"Waxaan ku dhowaaqeynaa aqbalaadda ra bitaanka iyo amarka ramsiga ee shacabka ee ah inaan soo geba-gebeyno Heshiiska Skhirat,” ayuu yiri isaga oo ka hadlaya heshiiskii 2015 ay QM dhex-dhexaadisay ee lagu soo dhisay dowladda Heshiiska Midnima da Qaranka (GNA).
Haftar ma uusan sheegin in baarlamanka ka dhisan Bariga dalka Libya, oo saxiixay he shiiska, ay taageersan yihiin tallaabada uu qa aday iyo waxa uu mustaqbalkoodu noqon do ono. Haftar ayaa sheega inuu sharciyad ka ha ysto maamul ka dhisan bariga dalka Libya, wu xuuna bishii April billaabay weerar uu maga alada caasimadda ah ee Tripoli ee galbeedka ku taalla uga qabsanayo dowladda lagu dhisay heshiiska midnimada.
Waxa uu Isniintii sheegay in ciidamadiisa "ay isku keeni doonaan shuruudaha lagama maarmaanka ah, si loo dhiso hay’adaha joogtada ee dowlad rayid ah.”
Hase yeeshee la-taliyaha dowladda GNA ee QM ay aqoonsan tahay ayaa diiday khudbaddii Haftar ee Isniintii.
"Haftar waxa uu mar kale dunida tusay damaciisa kali-talisnimo,” ayuu yiri Mohammed Ali Abdallah.
"Hadda kadib iskuma dayayo inuu qariyo si da uu u neceb yahay xal siyaasadeed iyo dim oqraadiyad ay Libya hesho. Hadalkiisa Xalay waa kii ugu dambeeyey, ficil naf la-caarinimo ah oo kasoo baxay nin laga adkaaday,” ayuu yiri.Weerarka Haftar uu ku doonayo inuu ku qa bsado Tripoli ayaa meelna u dhaqaaqi wa ay ey, waxaana ku naf waayey boqolaal qof,aya da oo ay ku barakacen qiyastii 200,000 oo qof.
Qabri qodayaasha Muqdisho oo shaaci yey tirada dadka ay maalintii aasaan oo aad u korortay
Qaar ka mid ah qabri qodayaasha M/Muq disho ayaa sheegay inay culeys badan kala kulmayaan tirada dadka ku dhimanayo magaa lada oo sii badana ya.
Mid kamid ah qabri qodayaasha oo lagu maga caabo Cali Maxamed lana hadlay tel efishi nka Shabelle ee M/Muqdisho, kaasoo ka shaqeeyo hal goob oo dadka lagu aaso, ayaa sheegay in ay maalintii qodaan 30-40 qabri, isla markaana ay maalmaha qaar ka tagaan iya goo dham maan dad ku aasay.
"Maalintii waxaan qodnaa 30-40 god, mar arka qaar waxaan ka hoyanaa iyadoo 10 kaliya aan waxba lagu aasin, halka maalmaha qaar dhammaan la isticmaalo,” ayuu yiri.
Cali Maxamed ayaa sheegay in dadka ay aas aan dhammaantood ay kawada sinaayeen in ay ku jireen darees cad oo uu ula jeeday kuwa loo geliyo dadka uu ku dhaco cudurka coronavirus.
"Waligey intaan shaqadaan ku jiray ma ark in inaan hal goob hal maalin ku aasno tiro in taan la eg, dhammaan dadka aan aasnay wa xay ka sinayeen inay ku jireen dhar cad cad,” ayuu sii raaciyey.
Illaa hadda si rasmi ah looma xaqiijin karo dadkaan tirada badan ee maalin kasta lagu aasayo Muqdisho inay u dhinteen cudurka coronavirus oo ay dowladda Soomaaliya shee gtay inuu si weyn ugu faafay magaalada.
Waxaa aad u yar tirada dadka ay maalin kasta dowladda ka baari karto cudurka, taasi oo hor seeday in dad badan ayaga oo qaban xanuu nka ay iska socdaan magaalada.
Caasimada Online ayaa horey u qortay in dadka magaalada ay ka cabanayaan xanuun isku mid ah oo cusub, islamarkaana leh ast aamaha Coronavirus, oo ku dhacaya.
Al-Shabaab oo fagaaro ku toogtay Saddex Ruux
Al-Shabaab ayaa fagaare ku yaalla D/Cee lbuur oo ka tirsan G/Galgaduud waxaa ay ku to ogteen 3Ruux oo ay ku eedeeyeen inay Mare ykanka kala Shaqeeyeen duqeymo uu la bee gsaday Saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha Ururka Al-Shabaab.
3da Ruux oo ay toogteen Al-Shabaab ayaa isugu jiray 2 Dhalinyaro ah iyo Nin Oday ahaa, kuwaas oo lagu kala Magacaabi jirey.
1: Axmed Nuuroow Maxamed Xeroow oo 23 sana jir ahaa,kaas oo ay ku eedeeyeen inuu la Shaqeynayay diyaaradaha wax duqeeya ee Mareykanka iyo Maamulka K/ Galbeed.
3: Bashiir Maxamuud dhagool oo 22 sana jir ahaa oo ay ku eedeeyeen in uu mas’uul ka ah aa duqeymo ay diyaaradaha Mareykanka la be egsadeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
3: Bishaar Axmed Cabdulle Hooloow oo 50 sa na jir ahaa,waxaana ay sheegeen inuu la Shaq eynayay Diyaaradaha duqeymaha fuliya ee Mareykanka iyo Maamulka Hir-Shabeelle.
Al-Shabaab ayaa horay sidaan oo kale mee lo badan oo kamid ah Bartamaha iyo K/ Soo maaliya fagaarayaal ku yaalla waxaa ay ku to ogteen dad ay ku eedeeyeen inay la Shaqey nayeen D/Soomaaliya iyo D/daha taageera.
Madaxweyne Qoor Qoor oo War kasoo saaray Xaaladda Qardho
Madaxweynaha D/Galmudug Md Axmed Cabdi Kaariye ayaa dhambaal tacsi ah u diray dhigg iisa D/G/P.Saciid C/hi Deni isagoo uga tacsiy eeyay dadkii ku geeriyooday daadadkii ku fata hay Magaalada Qardho.
”Aniga oo ku hadlaya Magaca DG/M, wax aan si dhaw murugada iyo xunaanka ula wad aagayaan ehelada iyo asxaabta dhammaan marxuumiintii ku shahiiday Musiibadii ka dhacd ay M/Qardho. Intii geeriyootay Alle ha u naxari isto, inta ku Dhaawaca ah soo kabasho iyo caa fimaad deg deg ah, intii ku hanti beeshana be del kheyr qaba Alle ha siiyo.
Ugu danbeyntii, Madaxweyne Qoorqoor ay aa ugu baaqay shacab weynaha Galmudug in ey u gurmadaan walaalaha ku waxyeeloobay musiibada daadadka ku dhufay Qardho xilli lala daalaa dhacayo saameynta taban ee ka dhalatay cudurka saf mareynka ah ee Cov-19
Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin oo ku baaqay in loo gurmad Shacabka Qardho
Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin, oo ka mid ah Isimadda waawen ee Puntland, ayaa marka hore Tacsi u diray Shacabka Puntland gaar ahaan dadweynaha Qar dho ee waxye elladu ka soo gaar tay daadadkii Habeen hore ku fatahay Qardho.
Beeldaajaha ayaa Tacsi gaar ah u diray qo ysaska ay lasoo gudboonaatay Geerida Iyo Shacabka ku waa yay Hantidoodi Fatahaadii Habeen hore ka dhacday M/ Qardho. Beeldaaje Ism aaciil, Beeldaaje Ya asiin, ayaa baaq deg deg ah u diraya Sha cabka Puntland, Isagoo ka Codsaday in Gur mad lala soo gaaro Bulshada ku dhaqan M/Qardho.
Sidoo kale Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin, ayaa u mahad-ceshay Madaxweyna ha Puntland, Deni oo Shalay gaaray M/Qar dho si Kor loogu qaado Taageerada Gurmad ka loona Maareeyo Gurmadka Qardho ku Waj ahan.
Natiijo hordhac ah oo kasoo baxday baar itaankii Coldoon ee Coronavirus
Wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon, ayaa Dorraad laga qaaday dheecanadiisa si looga ba aro cudurka halista ah ee Coronavirus /Covid-19, iyada oo lagu arkay calaamado ka mid ah kuwa lagu aqoonsado cudurkaa si. Sida ay xog ku helayso Caa simada Online, Baaristii Dorraad lagu sameeyay Wariye Coldoon ayaa waxa kasoo baxday Natiijo hordhac ah, oo ku saabsan xaaladdiisa.
Cabdimaalik Coldoon ayaa Baaristii 1aad lagu xaqiijiyey inuusan qabin cudurkaasi, balse uu qabo cudur kale oo aan la aqoonsan, kaasi oo mararka qaar neefta ku dhajinaya Coldoon, sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen Sara akiil ka tirsan Wasaarada caafimaadka Soma liland.
Baaritaanka natiijadaasi ka soo baxday ay aa waxa lagu sameeyay Isbitaalka weyn ee M/Hargeysa, inkasta oo dheecaanadiisa loo sii dirayo dalka dibediisa si loo sugo natiijada ka soo baxday baaritaanka hordhaca ah ee xaqiijineya inuusan Coldoon qabin xanuunka dadka badan ku laayay gudaha Soomaaliya.
Sida ay Caasimada Online u sheegen Dhak haatiirtii Dorraad ku booqatay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, Wariye Coldoon ayaa waxa laga dheehan karayey xanuun badan oo ka muuqda, iyada oo tabar daro baahsanina soo wajahday, midaasi oo uu sababay xanuun ilaa hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin, iyada oo uu hoos u dhacay shakigii ahaa inuu qabo Coronavirus.
Siyaasiyiin iyo Wariyayaal badan ayaa dalb aday in xabsiga laga sii daayo Cabdimaalik Co ldoon, iyagoo marar kala duwana dalabkaasi si toos ah ugu gudbiyay Madaxweyne Muuse Bi ixi oo u muuqda inuu weli ka dhago adeygayo fulinta dalabaadka tirada badan ee ku aadan sii deynta Coldoon.
Xukuumadda Somaliya oo la faray inay Guddi u saarto Arrinta Khardho
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/Hi Farmaajo ayaa bogaadiyey isu gurma shada iyo is-garab istaagga ay isu muujiyeen dadka deegaanada Puntland , gaar ahaan dhallinyaradii Habeen hore oo idil u taagnaa samata-bixinta qoysaska ay saameeyeen daadadka ku soo rogmaday Magaalada Khardho.
Madaxweynaha ayaa faray XFS inay Gu ddi Gurmad Qaran ah u saarto musiibada daa dadkan ku soo rogmaday Qardho,si dadka loo samatabixiyo. Roob saacadihii la soo dhaafay ka da’ ayay Magaaalada Khardha ayaa waxaa uu sababay inay M/daadad kusoo rog maday, waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay 7 Ruux.
Madaxweynaha Puntland oo Guddi u saar ay dhacdadii M/ Khardho
Madaxweynaha Puntland Siciid C/hi Deni ay aa Shalay booqasho ku tegay M/Qardho ee xarunta G/Karkaar, oo ay ka dhacday fatahaad ka dhalatay Roobabkii ka da’ayey gobolkaasi maalmahan.
Madaxweyne Deni, ayaa Bulshada Qardho la qeybsaday xaaladda Bani’aadantinimo ee ay ku jiraan, iyo khasaara ha naf iyo maal leh ee ka dhashay Biyaha magaalada kusoo rogmaday.
Wuxuu Madaxweynuhu ka qeyb galay Aaska dadkii ku geeriyooday daa dadka kusoo fatahay magaaladda, isagoo tacsi u diray ehelada iyo qoysaska dadkii geeriyo oday. Md.Deni ayaa ku dhex lugeeyay magaa lada isagoo kormeeray goobaha burburku gaa ray si uu usoo arko sida ay wax u dhaceen, wu xuu booqday boqolaal qoys oo ku barakacay daadadkii kusoo fatahmay Habeen horeto magaalada, isagoo la Kulmay bulshada oo uga warbixinays ay khasaaraha jira.
Wuxuu Madaxweynuhu sheegay in ay Dow laddu sameysay Guddi heer Wasiir ah oo Ga nacsataduna qeyb ka yihiin, kuwaasi oo ka sha qeyn doona gurmadka Qardho, Madaxweyna ha ayaa baaq u diray Dadweynaha Puntland iyo Guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed, DFS iyo Beesha Caalamka sidii looga wada qeyb qaadan lahaa xaaladda bani’aadantinimo ka jirta Shalay Qardho..
Itoobiya oo shaacisay kiisas horleh oo Coronavirus ah
Wasaaradda Caafimaadka ee D/Itoobiya ayaa Shalay oo Talaado ah waxaa ay sheeg tay in 2qof oo kale laga helay safmarka Cu durka Coronavirus. W/W/Caafimaadka oo Akhr isay Warbixinta maalinlaha ah ayaa sheegtay in 24-kii saac ee la soo dhaafay baaritaan lagu sameeyey 1080 Ruux Cudurka laga helay laba qof.
Waxaa ay hadalkeeda intaasi ku dartay in 2daasi qof ay yihiin kuwo kasoo jeeda dalka Britain,kuwaas oo maalmahaan ku jiray Xarun ta karantiilka. Tirada dadka laga halay Cudur ka COVID-19 ee dalka Itoobiya ayaa haatan gaartay 126 qof,waxaa karantiil ku jira 71 Ru ux, iyada oo Cudurka ay ka codsadeen 71 Ruux.
Axmed Madoobe oo taleefon kula hadlay Madaxweynaha Puntland
Madaxweynaha D/G/J.Md.Axmed Ma xamed Islaam ayaa ku baaqay in si guud loogu gurmado M/Qardho oo ay ku dhufteen daadad saameeyay Nolosha dadka. Madaxweynaha oo Telefoonka kula hadlay Madaxweynaha D/Puntland Md.Siciid C/hi Dani ayaa sheegay in Shacabka iyo Xukuumada Jubbaland ay garab taagan yihiin qoysaska eheladooda ku waayay iyo kuwa ku gurya beelay musiibadan oo tiiraanyada ay la qabaan
Madaxweynahu wuxuu Tacsi u diray ehela da dadkooda ku waayay musiibadan isagoo Caafimaad u rajeeyay dadka saamaynta dhiba atada Wali la tacaalaya.
Waxaa kale oo Madaxweynahu uu hoosta ka xariiqay in ay xili roobaadkan jiri karaan fata ahado iyo daadad ku dhufta Dhulka ku teeds an Wabiyada iyo dooxooyinka dalkeena kuwa as oo ay tahay in ay feejignaan dheeri ah muu jiyaan sidoo kalana mar walba diyaar loo ahaa do sidii loogu gurman lahaa hadii ay dhacdo mashaqadan oo kale.
Beesha Caalamka oo War kasoo saar tay heshiiskii Madaxweynaha Jubbaland iyo Mucaaradka
Saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya waxay soo dhaweynayaan wadahadalkii u dhe xeeyay maamulka Jubaland iyo hoggaanka Golaha Isbadalka ee Jubaland kaasoo ku dhammaaday hesh iis dib-u-heshiisiin ah oo la sa xiixay 23 Abriil.
Heshiisku wuxuu u taagan yahay tallaabo wax ku ool ah oo lagu xallinayo khilaafaadka ka soo ifbaxay hannaanka doorashada Juba land ee Agoosto 2019.
Natiijooyinka doorashada ee lagu murans an yahay ee Jubaland iyo Dawladaha xubinta ka ah DFS 18-kii bilood ee la soo dhaafay wa xay hoosta ka xarriiqaysaa muhimadda ay leedahay hannaanka doorashada ee la isku ha lleyn karo oo ay Soomaalidu ku dooran karto hoggaamiyeyaasheeda iyada oo la raacayo Dastuurka Federaalka iyo Dastuurka ee xubin ta ka ah Dawladda Federaalka.
Wada-hawlgalayaashu waxay ku dhiirrigelin ayaan dhammaan daneeyayaasha Jubaland, oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaasha siyaasade ed,bulshooyinka iyo hoggaamiyeyaasha dhaq anka inay dhisaan heshiiskii 23 Abriil, ay hirgel iyaan tallaabooyinka dabagalka, ayna sii wad aan wada hadalkooda wax dhiska
Wada-hawlgalayaasha ayaa soo dhawey naya rabitaanka ay muujiyeen daneeyayaasha Jubaland ee ku aadan la shaqeynta DFS, iyo in Jubaland ay diyaar u tahay wada shaqeyn buuxda oo ay la yeelato DFS.
Saaxiibada caalamiga ah waxay ku boori nayaan maamulka Jubaland iyo hogaanka FGS inay si nabad ah ku xalliyaan khilaafaad kooda sii dhex mara iyada oo loo marayo wa dahadal, iyo in la yareeyo xiisadaha ka sii soc da gobolka Gedo.
Waxa ay ugu baaqeen dhammaan Sooma alida inay dhiirrigeliyaan midnimada iyo dib-u-heshiisiinta iyaga oo bilaabaya bisha barakeys an ee Ramadaan iyada oo aaney kaliya soo fo od saarin qatarta aan horay loo arag ee ka dha cda COVID-19 laakiin waliba khatarta joogtada ah ee argaggixisada.
Askarigii ugu horreeyey oo ka tirsan AMISOM oo laga helay COVID-19
Askari ka tirsan ciidamada AMISOM una dhashay dalka Uganda oo ku sugan Soomaal iya aaa la sheegay in laga helay xanuunka CO VID-19. Ilo wareed ka tirsan AMISOM ayaa VOA u sheegay in askarigaasi uu ka hawlgalay ey dekedda magaalada Muqdisho oo dhaq-dhaqaaqeedu badan yahay.
Askarigan ayaa ka bixin Soomaaliya mudo lix bilood ah, waxaana ilo wareedyadu aamins an yihiin inay tahay xaalad uu qaaday intii uu ku sugnaa gudaha Soomaaliya.
Waa askarigii ugu horreeyey ee ka tirsan cii damada AMISOM ee laga helo cudurka Coro navirus.
Ilo ka titrsan AMSOM oo diiday in magaco oda la sheego ayaa intaasi ku daray in hawla galka AMISOM uu qaaday tallaabooyin caafim aad oo uu ka dhaqangeliyey xarunta hawlgalka AMISOM iyo xarumaha kale ee ciidamada oo ay ka mid yihiin wacyigelin, goobo biyaha fara xalka laga helo, saabuun iyo weliba goobo la gu karantiilo dadka looga shakiyo xanuunka.
Somaliya ayaa waxaa guud ahaan laga diiw aan-geliyey 528 kiis oo COVID-19 ah, iyo dhi mashada 28 qof oo cudurkaas u geeriyooday.
OGAYSIISKA GUUD DIGNIINTA GANACSIGA
Mitsubishi Shoji Kabushiki Kaisha (also known as Mitsubishi Corporation), of 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
waxaana loo isticmaalaa xiriirinta
Kuleyliyeyaasha matoorka ee matoorka, tuubbooyinka kuleyliya; Marawaxadaha Steam / marawaxadaha gaaska ee isticmaalka dhulka iyo badda, marawaxadaha biyaha, marawaxadaha dabaysha; Nidaamyada dhalinta korantada, dhirta isku-dhafka, dhirta korantada, dhirta dhirta, Dhirta dabaysha; Dhirta niyukliyerka iyo qalabyada la xiriira, Qalabka sun-siinta ee loo adeegsado dhirta quwada nukliyeerka; Mashiinnada warshadaha / badda & isticmaalka beeraha, matoorka Diesel, matoorrada Steam, matoorrada Jet, Mashiinnada doomaha, Doomayaasha loogu talagalay matoorrada, Qalabka cirbadaha ee matoorrada, matoorrada matoorrada; Soo saareyaasha korantada, matoorrada injineeriyada Diesel; Gawaarida korantada ee aan ka aheyn gawaarida dhulka; Turbochargers; Farsamooyinka carqaladeynta aan ka aheyn gawaarida dhulka; Nidaamyada kontaroolada ee matoorrada / matoorrada; Bambooyin, matoorrada Centrifugal, matoorrada hawada ee turbo-molikula, Mashiinada hawo qaadashada loogu talagalay cadaadinta / daalista iyo gaaska gaaska, Qalabka lagu kala soocayo gaaska iyadoo la cadaadinayo xawaaraha adsorption, Awoodda kuleyliyaasha hawo-qaboojiyeyaasha iyo qaboojiyeyaasha, unugyada isku-haynta; Xarumihii saliida nadiifinta iyo xarumaha kale; Nadiifiyaha saliida, shaandhada durbaarka Rotary, filterka toosan shabaqa digsiga, qalabka wax lagu nadiifiyo otomaatig, aaladaha kiimikada iyo qalabka kiimikada ee la xiriira; Isku darka; Autoclaves; Kuleylka kuleylka; Aruurinta qunyar socodka ah; Dhirta Sulfuric acid, Dhirta Polyacetal, dhirta saliida soo saarida ee joogtada ah, Dhirta Formalin, Dhirta Ethylene, Dhirta kaarboon madow; Qalabka Mashiinka, Qalabka loogu talagalay mashiinnada aaladaha xakamaynta kumbuyuutareedka, Qalabka goynta, xirmooyinka qodista, biraha qulqulka, aaladaha Carbide, Mashiinnada, Rotors, mashiinnada shiidi, mashiinnada Miinada; Buundooyinka wax lagu dhejiyo, Qalabka Milgaha, Alaabada weelasha lagu qaado, Qalabyada wareejinta, wiishashka sabuuradda ah, Meelaha cimilada, kuwa aan ololeynin, Xulashada, Derrick, conveyors Belt, Qalabka gacan ku haynta iyo soo dejinta; Mashiinnada wax soo saarista birta iyo birta, Mashiinnada Rolling; Mashiinka caaryada caaga ah; Dabeecadaha Timaha; Mashiinnada dharka; Samaynta waraaqaha iyo mashiinnada beddelka; Mashiinnada baakadaha cuntada, Mashiinnada baakadaha Vacuum, Qalabka dhalada iyo dhalada, Alaabada dhalada ah, Nadiifiyaasha dhalada, Kafeejiyeyaasha, Qubeysashada; Mashiinnada saxaafadda ee ujeeddooyinka warshadaha; Mashiinnada daabacaadda, jaraa'idka daabacaadda, joornaalada websaydhka; Mashiinka dharka lagu dhaqo (dharka lagu dhaqdo); Robots loo adeegsado warshadaha; Qeybaha qodista ee ka baxsan xeebaha, dhirta wax soo saarka saliida & gaaska, kaydinta saliida & qeybinta; Mashiinnada dhismaha, mashiinnada qodayaasha, mashiinada jidadka la dhigto, Mashiinada samaynta wadada, Mashiinada dib u warshadaynta, Gawaarida gawaarida, Mashiinada Xaraashka, Mashiinada Gawaarida, Mashiinada gaashaanka; Qalabka Qalabka; Qalalaasaha kale ee aan ahayn gawaarida dhulka; Unugyada Kaarboon; Fidinta korantada, sanaadiiqda Gear / Geeraar goynta aan ka aheyn gawaarida dhulka, convertors Torque; Biyo; Mashiinada Beeraha, cagafleyda Beeraleyda, Beeraleyda Rotary, Kuwa xoola dhaqatada ah, Isku-darka kuwa goosta, kuwa goosashada wax ku gooya, Gawaarida Paddy; Mashiinnada goynta goynta, dhaqaaqa cawska, qallajiyeyaasha gogosha, Xalaalaha; Elevators, Escalators, socodka lugaynta, Mashiinada toloyinka tolidda, matoorka isku dhejinta ee mashiinada tolidda, matoorka isku dhejinta, matoorrada korantada, Qeybaha korantada ee korontada ku shaqeeya, Qaybinta gawaarida gawaarida, Qeybaha korantada ee gawaarida, Qeybta korantada ee koontaroole carburetor elektroonikada, Qalabka korontada, Ignitors, mashiinada nadiifinta biyaha, matoorka matoorrada Steam, matoorrada jiqda, bambooyinka guriga, wiishka, matoorrada gawaarida, qalabka wareejinta, qalabka korantada ee korantada lagu xukumo ee gawaarida; Mashiinnada siidaynta korantada, mashiinnada qalabka miisanka leh ee loo yaqaan 'cluster beam qalab, mashiinka cylindric clamp, Seam welders, mashiinka kuleyliyaha hawada ee birta, birta, warshadaha warshadaynta, qalabka gaaska, qalabka matoorrada, matoorrada gawaarida, Aerators, mashiinada kuleylka
Mashiinnada tolidda korantada, Koronto dhaliyaha matoorrada iyo matoorrada, matoorrada Servo ee mashiinka tolidda, Gawaarida bilaa bilaawayaasha ah, Dynamos, matoorrada hawo-biyoodka, matoorrada mashiinka mashiinka cabbirka, kuwa guryaha ku shaqeeya ee korontada ku shaqeeya, mashiinnada dharka lagu dhaqo, mashiinnada birta, Mashiinnada jikada korontada; Filterka saliida ee gawaarida, Filinka hawada ee gawaarida, Pistons of engine; Qeybaha iyo waxyaabaha kale ee ay ka kooban yihiin alaabooyinka ka mid ah waxyaabaha kor ku xusan; Daabacayaasha 3D; O-ring-ka [qaybo ka mid ah mashiinnada]; fargagga dufan [qaybo ka mid ah mashiinnada]; jumlado yar oo loogu talagalay mashiinnada gubashada gudaha; gasacado bir ah oo loogu talagalay makiinadaha gawaarida; jumlado, oo aan bir ahayn, oo loogu talagalay mashiinnada baabuurta; Nadiifinta faaruqinta korantada; Matoorrada gawaarida; Mashiinnada ka shaqeynta Laser-ka ee warshadaha; Dab-dhaliyeyaasha Tamarta; Wadooyinka dhaqaaqa; Soo-saare tamarta qorraxda; Falayaasha gawaarida; Darawalada irbadaha ee baabuurta dhulka; Magnetors for land land; Mashiinka ka shaqeeya birta s iyo aaladaha; aaladaha mashiinada ka shaqeeya; mashiinnada goynta; goynta qalabka mashiinnada; madaxyada qodista [qaybo ka mid ah mashiinnada]; tababarada [qaybo ka mid ah mashiinnada]; qashin qodid [qaybo ka mid ah mashiinnada]; daqiiqda qalabka [qaybo ka mid ah mashiinnada]; kaadiheysta [qaybo ka mid ah mashiinnada]; mashiinnada qashin-qubka [ee loogu talagalay biraha shaqeeya]; mashiinnada qodista [ee biraha shaqeeya]; qalabka wax lagu gooyo [qalabka mashiinka]; goynta googooyeyaasha iyo talooyinka goynta ee loo adeegsado qalabka goynta; aaladaha gacanta lagu qabto; Tababbarka korantada [gacanta lagu dhigo]; Qalabka carbide-xarkaha ah Qalabka carbide-ka-goynta ah ee sibidhka Tilmaamaha carbide-ka sibidhka; qalab qalloocan cBN (cubic boron nitride) qalab jarid; aaladda goynta dheeman ee mashiinnada; aaladda bir-fiiqidda aaladda bir; dheeman dheelitirka dheemanka ee mashiinnada; aalado goynta dheeman; wasakhooyinka oo u dhinta samaynta biraha; haysashada aalado loogu talagalay aaladaha mashiinka; qasabadaha [qalabka mashiinka]; chucks [qaybo ka mid ah mashiinnada]; dhagax dhagax [qaybo ka mid ah mashiinnada]; korantada 'qeybaha mashiinnada'; qalabka haysta (qaybo ka mid ah mashiinnada]; mashiinnada [qaybo ka mid ah mashiinnada]; mishiinnada sameynta bira